Taariikhda nololeedkii Ustaad: Cali-Muddiir, Macallinkii Dhallinyarada AUN – The official Somali Historical
Cali Sh Axmed “Cali-Muddiir” wuxuu ku dhashay degmada Ceel Buur xilli aanan anigu garaneyn wuxuuna Macallin noqday 1958 ka dib markii uu ka soo baxay Iskuulka Dishibiliinka Islaamka. Mar dambena wuxuu ka qalinjebiyay Kulliyadda Waxbarashada Lafoole ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed JUS.Cali Shiikh Axmed, oo loo yiqiin Cali-Muddiir oo sida magaciisa ka muuqata Macallin Iskuul ka ahaa Soomaaliya muddo aad u dheer ayaa caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Allah ha u Naxariisto.
Berigii ay adkaatay in Jaamacad la helo, tirada Dugsiyada ka soo baxaysa oo aad u badatay darteed, waxaan xusuustaa isaga oo dhallinyaro Jaamacad waayay oo turub iyo dubnad ku cayaara biibitooyinka maagaya si uu rajo u geliyo. Wuxuu ku yiri berigii hore waxaa jiri jiray wax la yiraahdo xereysi – waa in la raaco Shiikh Caalim ah, kutubaha loo qaado, muxaadarooyinkiisa la dhegeysto, mas’alo kasta oo uu ka jawaabayo la fahmo, marka uu firaaqo leeyahay kutubo laga raacdo, lala sheekeysto, su’aalo la weyiidyo si wax looga barto. Orda oo aqoonyhannada waaweyn sida Prof. Tuuryare kutubaha u qaada, la diyaariya muxaadarooyinkooda, kala shaqeeya baaristooda, la qora buugaagta, su’aalo weydiiya si aad wax uga barataan.
Waxaan xusuustaa muxaadaro ku saabsan dhaqaalaha dalka oo galab lagu qabtay isla aqalka Umadda in uu Cali-Muddiir farta taagay oo ninkii casharka jeediyay uu billaabay in uu su’aal ku weydiiyo af- Carabi. Ka dibna ninkii shir guddoominayay oo madax sare ahaa laakiinse aan Carabi fiican aqoon uu ka dhex galay oo ku yiri Cali jooji af-Carabiga oo Soomaali ku hadal. Cali-Muddiir dheg uma dhigin, xataa ma eegin Shir Guddoonka oo hadalkiisii Carabiga ahaa ayuu sii watay isaga oo indhihiisu ay ku sii jeedaan ninkii casharka jeediyay keliya. Markii ninkii Madaxda ahaa codkiisa sare u qaaday oo yara kululaaday, Cali wuu soo eegay wuxuuna ku jawaabay in ninka uu su’aasha weydiinayaa uu yaqaan Carabiga, isla markaana afka Carabigu uu yahay luqad Dastuurka ku qoran oo rasmi u ah Soomaaliya, sidaa darteed aanuu u diidi karin in uu ku hadlo.
Previous: Taariikh nololeedkii General Maxamed Cali Samatar
Next: Taariikh nololeedkii madaxweyne C/rashiid Cali Sharmaarke